iPhoto Calendar: Sida loo sameeyo Photo Calendar la iPhoto on Mac
iPhoto yimaado la computer kasta Mac tan iyo 2002, oo qayb ka ah Suite codsiga iLife ah. Waxaa dajiyaan karaa, loo abaabulo, xaalkaa, print iyo sawiro digital fudayd wadaagaan. Maanta, waxaan ku tusi doonaa sida loo sameeyo jadwalka sawir la iPhoto ah oo aad u hesho waxa ay si toos ah u gudbiyey in gurigaaga.
Qeybta 1: Sida loo sameeyo Calendar la iPhoto
Qeybta 2: More Photo Software Calendar u Mac
Inkastoo iPhoto noqon karaa mid aan software ugu fiican taariikheed Mac, waa mid fudud in my opinion, waana lacag la'aan ah. Cool, midig. Hadda hoos ku arki ku saabsan sida loo sameeyo jadwalka sawir la iPhoto ah.
Tallaabada 1. Dooro Photos iyo Dooro Calendar Mowduuca
Burcad iPhoto iyo sawirka aad rabto in lagu daro in aad jadwalka dooran. Markaas riix Calendar button ee geeska midig ugu hooseysa toolbar iPhoto ah. In menu pop-up ah, daraasiin marto jadwalka lagu soo daray. Dooro mid aad ugu jeceshahay.
Ogsoonow in gujinaya ah " Options + Qiimaha "button furi doonaa Print Products bogga internetka iPhoto ah, taas oo aad ku tusi doonaa faahfaahinta taariikheed iyo macluumaad binta.
Tallaabada 2. Samee iPhoto Calendar
First of dhan, dhigay jadwalka si sax ah. Waxaad dooran kartaa bilaha iyo dalka fasaxyada habboon calaamadeeyay. Haddii aad isticmaasho iCal, waxa kale oo aad dajiyaan karaa oo dhan dabbaaldegyada muhiim ah oo dhalasho inay iyaga ku daabacan jadwalka.
Riix OK iyo daaqad cusub arbushin ilaa doona. Markaas waxaad ku dari kartaa sawiradaada, beddesho qoraalka iyo auto diyaarin photos adigoo riixaya "button Autoflow".
Tallaabada 3. Buy iPhoto Calendar
Marka aad ku qanacsan tahay jadwalka iPhoto, dhufatey Calendar Buy button (waa meesha ugu hooseysa) si ay u meel aad si oo aad jadwalka iPhoto toos idiin dhiibay ka dib markii 2-3 toddobaad.
Waxaad booqan kartaa bogga internetka ee Apple ayaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan iPhoto Calendar, wax kasta oo ku saabsan samaynta jadwalka iPhoto ama dhalmada.
Qeybta 2: More Software Photo Calendar u Mac
IPhoto sokow, software jadwalka sawir kale ee Mac sidoo kale kaa caawin karaan inaad hesho shaqo lagu sameeyey. Qaybtan, waxaan kuu soo bandhigi doonaa qaar ka mid ah jadwalka Sawirkii Ugu Fiicnaa ka dhigaysa in suuqa.
Wondershare iCollage for Mac sidoo kale waa software taariikheed ee sawir u ah Mac, oo ay ku jiraan in ka badan arrimo ka hor loogu talo galay oo sawir buug, arrimo card salaan, arrimo jadwalka badan iPhoto. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad naftaada daabacan jadwalka la printer ah , halkii ay ka iibsado online. Sidaas, waxaad badbaadin kartaa waqti iyo lacag. Halkan waxa aad kala soo bixi kartaa waa:
# 2. Platinum PrintMaster
PrintMaster Platinum la Timaadda 577 jadwalka arrimo kaas oo awood kuu si fudud loo abuuro taariikh digital. Waxa kale oo aad dajiyaan karaa images kuu gaar ah ama ka soo xusho images kala duwan in yimaado oo ay la socdaan software ah.
# 3. Print Qarax
Print Qarax ka helaa kumanaan sawiro iyo boqolaal ka mid ah noocyada lagu daro oo dhan foomamka. The fudud feature jiitaa-n-dhibic ka dhigaysa software u fududaynay qof walba si ay u sameeyaan ay taariikheed ee digital u gaar ah.
Sida loo abuuro 3D WAYDAARKA Flash Gallery la Music
Share iyo View Pictures on TV qoyska iyo saaxiibada
Sida loo geliyaan Photos ka iPhoto in Facebook
> Resource > Talooyin > Sida loo sameeyo Photo Calendar la iPhoto ee Mac